Nin ka soo muuqday baraha bulshada isaga oo rasaas ku ridaya gabdho ayaa la sheegay inuu… – Hagaag.com
Nin ka soo muuqday baraha bulshada isaga oo rasaas ku ridaya gabdho ayaa la sheegay inuu…
Nin maalmhii aynu soo dhaafnay siweyn uga soo muuqday baraha bulshada isaga oo rasaas ku ridaya gabdho Soomaaliyeed oo ku dibadbaxayay magaalada Muqdisho ayey dowladdu xaqiijisay in uu ka tirsanaa ciidanka Booliiska Soomaaliyeed.
Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale oo la hadlay VOA ayaa sheegay in Ninkaa la soo qabtay islamarkaana uu ku jiro gacanta hay’addaha Amniga, waxaana uu intaa ku darray in uu ka tirsanaa Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed.
Ninkan oo xiliga uu rasaasta ku ridayay shacabka dibadbaxa dhigayay aan sidan dareyska ciidamada ayaa la arkayay isaga oo si toos ah rasaas ugu ridayay gabdho ka mid ahaa dadka dibadaxa dhigayay oo ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya sida ay u mareyso doorashada.
”Ninkan waa la soo qabtay Booliska ayuu ka tirsanaa, dharcad ayuuna xirnaa. Sharciga ayaa la marsiinayaa, sharcigana cid ka weyn ma lahan, khaladkana waa dhacayaa, cid kasta ayuu ka dhacayaa. Ninkaas waxaa laga qaatay go’aankii ku habboonaa,” ayuu yiri Xundubey.
Wuxuu sheegay in sababta mar marka qaar dowladdu u ogoleyn dibadbaxyadu tahay oo kaliya sababo dhinaca Amniga ah madaama ayuu yiri dadka shacabka lagu soo dhax-dhuuman karo.